ကလိုစေးထူး: April 2009
စာရေးဆရာကြီးတယောက်က သူ့စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာ ရေးဖူးတာ တခုရှိပါတယ်။
`ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတပုဒ်ကို နောက်ခြောက်လ၊ တနှစ်လောက်အကြာကျရင် တခါပြန်ဖတ်ကြည့်၊ အဲဒီလို ပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ တယ်ဟုတ်တဲ့ ငါပါလားလို့ အတွေးဝင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဟာ အဲဒီခြောက်လ၊ တနှစ်ကာလ အတွင်းမှာ ဘာမှ မတိုးတက်လာသေးဘူးလို့ မှတ်၊ ဒါမှမဟုတ် အင်း...၊ ငါတော့ဖြင့် အဲဒီတုန်းက ရေးခဲ့တာတွေက ဘယ်နေရာမှာတော့ လိုသွားတာပဲ၊ နောက်နောင် ဒါမျိုး မဖြစ်အောင် လေ့လာဆင်ခြင်မှလို့ အတွေးဝင်ရင်တော့ တိုးတက်လာတယ်လို့မှတ်´ ...တဲ့။
ဘလော့ဖော် `ကိုရင်နော် ခင်လေးငယ်´ ရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် ဒီနေ့တော့ ကျနော် ရေးခဲ့ပြီးသမျှ စာတွေကို နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်ပြီး ဖတ်ဖြစ်တယ်။
အပေါ်က ဆရာကြီးရဲ့ စကားအတိုင်းအရဆိုရင်တော့ ကျနော်ဟာလဲ ဘာမှမတိုးတက်လာသေးတဲ့ လူထဲမှာ ပါနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အခု နောက်တကြိမ် ထပ်မံဖော်ပြမယ့် ပို့စ်ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တော့ ကျေနပ်မိ၊ အားရမိဆဲ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ပို့စ်နာမည်က `လမ်းနဲ့ ခလုတ်´ ...တဲ့။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တုန်းက တင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဖတ်ပြီးသူများ ပြန်လည်ခံစားနိုင်သလို မဖတ်ရသေးသူများအတွက် ပြန်လည်ဆားချက် တူးဖော်လိုက်ပါတယ်။
ကျနော် အလုပ်မှာ ဒီနေ့ အချိန်ပို ဆင်းရပါတယ်။ အလုပ်ကနေ ညနေ ငါးနာရီကျော်မှ ပြန်ရတော့ မှောင်စပျိုးလို့ နေပါပြီ။ ဟိုကရင် အကိုကြီးက ပုံမှန် အလုပ်နားချိန် သုံးနာရီခွဲကတည်းက ပြန်နှင့်တော့ ကျနော်တယောက်ထဲ ပြန်လာရပါတယ်။ ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ ပြန်လာရင်းနဲ့ မြစ်ကူးတံတား အတက်နားမှာ ခလုတ်တိုက်မိပါလေရော။ ခြေထောက်က မျက်ကနဲ နာသွားတော့ စိတ်တိုသလိုလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ လမ်းဘေးက ခုံတန်းလေးမှာ ၀င်ထိုင်ရင်း ခြေထောက်ကို ငုံ့ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲကနေ လမ်းကို မကျေမနပ်ဖြစ်လာပါတယ်။
`တောက်.. ဒီလမ်းကြောင့် ဖြစ်ရတာ´
`အသုံးမကျလိုက်တဲ့လမ်း၊ အခုကြည့်စမ်း.. ခလုတ်တိုက်မိတာ နာလိုက်တာ´
`ကားဝယ်ဖြစ်ရင်တော့လား.. ဒီလိုလမ်းမျိုး လုံးဝမလာဘူးကွာ´
အားရပါးရကြီး လမ်းကို ကျိန်ဆဲရင်း မော့ကြည့်မိတော့ လမ်းက ကျနော့်ကို မျက်မှောင်ကြီး ကုတ်ပြီး ငုံ့ကြည့်နေသလိုပဲ။ နောက်တော့ သူကလဲ ကျနော့်ကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မကျေမနပ် ရေရွတ်သံတွေ ထွက်လာတယ်လို့ ခံစားလာရပါတယ်။ ဘယ်ရမလဲ.. ကျနော်ကလဲ သူ့ကို မကျေမနပ်နဲ့ ပြန်ပြောတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်နဲ့ လမ်းနဲ့ စိတ်ကူးထဲမှာ စကားအချေအတင် များကုန်ပါတော့တယ်။
`မင်းက အခုတော့ ငါ့ကို အပြစ်မြင်တယ်ပေါ့လေ၊ ဟုတ်လား´
`ဟာ၊ ဒီမှာကြည့်လေ ကျုပ်ခြေထောက် နာသွားတယ်၊ ခင်ဗျားလမ်းကိုက မကောင်းလို့ပေါ့ဗျ´
`အဲဒါပဲ၊ မင်းတို့ လူတွေ သိပ်ခက်တဲ့ကောင်တွေပဲ´
`နေစမ်းပါအုံး၊ မင်းကို ငါမေးပါအုံးမယ်၊ ဒီလမ်းကို လျှောက်ဖို့ မင်းကို ဘယ်သူကများ အတင်းအကျပ် တိုက်တွန်းခဲ့လဲ၊ မင်းသဘောနဲ့မင်း လျှောက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလားကွ၊ မင်းပဲ ဒီလမ်းက သာယာသလေး ဘာလေးနဲ့ ပြောခဲ့သေးတယ်လေ´
`ဒါတော့ ဒါပေါ့ဗျ၊ ဒါပေမယ့် အခု ကျုပ်ခလုတ်တိုက်တာ တော်တော်နာတယ်ဗျ´
`အင်း၊ မင်းဆိုတဲ့ကောင် လူဖြစ်ပြီး လောကနိယာမကိုတောင် ဘာမှ နားမလည်သေးဘဲကိုးကွ´
`ဟမ်၊ ဘာဖြစ်လို့တုန်းဗျ၊ ခလုတ်တိုက်တော့ နာတယ်ဗျာ၊ ဒီတော့ ခင်ဗျားကို ကျိန်ဆဲချင်စိတ် ပေါက်လာတယ်ဗျာ၊ ဘာဖြစ်သလဲ၊ ဒါက လူတွေရဲ့ ခံစားချက် တမျိုးပဲမဟုတ်ဘူးလား´
`ဒီလိုဆိုရင်တော့ မင်းကို ငါပြောရသေးတာပေါ့´
`ဟောဒီ လမ်းပေါ်မှာ လူပေါင်းစုံ သွားလာဖူးတယ်ကွ၊ စက်ဘီးလမ်းဆိုပေမယ့်၊ စကိတ်စီး အပန်းဖြေတဲ့ လူတွေ၊ လမ်းလျှောက် လေညှင်းခံတဲ့လူတွေ၊ အပြေးလေ့ကျင့်တဲ့လူတွေ ပြီးတော့ မင်းတို့လို အလုပ်သွား အလုပ်ပြန်ကောင်တွေလဲ ပါတာပေါ့´
`တလောကဆိုရင် စကိတ်စီးတဲ့ ငနဲတကောင် ချော်လဲတာ အတော်နာသွားပုံရတယ်ကွ၊ ဒူးခေါင်းမှာလဲ သွေးတွေကို ရဲနေတာပဲ´
`တခါတုန်းကဆိုရင်လဲ ပြိုင်ဘီးစီး လေ့ကျင့်တဲ့ ကောင်မလေးတယောက် စက်ဘီးမှောက်သေးတာပဲ´
`ဟိုတခါကတော့ တော်တော်ဆိုးသကွ၊ မျက်စိမမြင်တဲ့ အဘွားကြီးကွာ၊ တောင်ဝှေး တဒေါက်ဒေါက်နဲ့ စမ်းတမ်းစမ်းတမ်း လမ်းလျှောက်တာ မှောက်ရက်လဲပါလေရောလား´
`ဒါပေမယ့် သူတို့က မင်းလိုတော့ ကိုယ်လျှောက်တဲ့လမ်းကို ကိုယ်အပြစ်ပြန်မတင်ဘူးကွ´
`စကိတ်စီးတဲ့ကောင်လဲ ချော်သာလဲတာ၊ စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ ပြန်ထပြီး သူ စကိတ်စီးတာကို ပိုကျွမ်းကျင်အောင် ထပ်စီးတာပဲ´
`စက်ဘီးစီးတဲ့ ကောင်မလေးလဲ ဒီလိုပဲ၊ မိန်းကလေးသာဆိုတယ်၊ တချက်မမဲ့ဘူးကွာ၊ လဲသွားတဲ့ စက်ဘီးကို ပြန်ထူပြီး သူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်တာပဲ၊ ဟိုအဘွားကြီးကရော ဘာထူးသေးလဲ၊ လဲကျသွားတော့လဲ သူလမ်းလျှောက်နေတာကို ဆက်လျှောက်တာပဲကွ´
`အေး၊ မင်းကို ငါပြောချင်တာက၊ လမ်းဆိုတာ လူတိုင်းသွားတယ်၊ သွားတဲ့လူတိုင်း တကြိမ်မဟုတ် တကြိမ်တော့ ခလုတ်တိုက်မယ်၊ လဲကျမယ် ဒါ လောကရဲ့ သဘာဝတရား၊ နိယာမ တရားပဲကွ´
`ဒါကိုပဲ မင်းက ခလုတ်လေး တခါလောက်တိုက်မိတာနဲ့ ဒီလမ်းကြောင့် ဖြစ်သလေးဘာလေးနဲ့´
`ကျနော် နာသွားတဲ့ ခံစားချက်ကြောင့်ပါဗျာ´
`အေး၊ မင်းက ဒီလမ်းကိုလျှောက်လို့ ခလုတ်တိုက်မိတာကို ညည်းညူနေတယ်၊ စောစော မင်းပြောနေတာ ငါကြားလိုက်ပါတယ်၊ မင်းကားဝယ်ရင် ဒီလမ်းကို မလျှောက်တော့ဘူးဆို၊ ဟုတ်လားကွ´
`မှတ်ထားကွ၊ ကားလမ်းမှာ အမှားတချက်တွေ့ရင်တော့ မင်းအသက်ပါ ဇီဝိန်ကြွေသွားမယ်´
`မဗျာနဲ့၊ မင်းသေသေချာချာ စဉ်းစားစမ်းပါ´
`အခု မင်းခလုတ်တိုက်မိတာကို စိတ်မပျက်ပဲ မင်းသွားချင်တဲ့နေရာကို ပျော်ပျော်ကြီး သွားစမ်းပါကွာ၊ ဒီတခါ တိုက်မိရင် နောက်တကြိမ် မတိုက်ရအောင် မင်းသတိထားပေါ့ကွ´
`နောက်တခု ထပ်ပြောလိုက်မယ် ကိုယ့်လူရေ၊ ခလုတ်ကိုကြောက်နေရင် မင်း ဘယ်လမ်းကိုမှ လျှောက်မနေနဲ့တော့´
အေးစိမ့်စိမ့် လေပြင်းတချက် ၀ူးကနဲ တိုက်လိုက်တော့ ကျနော်တယောက် အတွေးထဲမှာ လမ်းနဲ့ စကားများနေရာကနေ လန့်နိုးပြီး လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကို ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်တော့ အတော်မှောင်နေပါပြီ။ လမ်းကလေးကို ပြန်ကြည့်တော့ အမှောင်တွေကြားထဲကပဲ ကျနော့်ကို ခွင့်လွှတ်တဲ့ အပြုံးနဲ့ ကြည့်နေသယောင်ယောင်။
ကျနော် လမ်းဆက်လျှောက် ရပါအုံးမယ်။ ခလုတ်တွေလဲ တိုက်ကောင်းတိုက်နေအုံးမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ဆက်လျှောက်ရမှာပါပဲ။ လမ်းနဲ့ ခလုတ်ဆိုတာက တွဲလျက်ရှိနေတာပဲလေ။
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:18 PM 17 comments
ပင့်သက်လေ တချက်ကို အားရပါးရ မှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး ခုံပေါ်မှာ ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ချလိုက်သည်။ ဒီနေ့ အလုပ်ကပြန်လာရတာ ပင်ပန်းလိုက်ပါဘိတော့...။ ပြတင်းတံခါးမှ မြင်နေရတဲ့ အပြင်လောကကို ကြည့်လိုက်တော့ နေက ခြစ်ခြစ်တောက်အောင် ပူနေဆဲပင်။ အပင်တွေကို ကြည့်လိုက်တော့လဲ နွေလယ်အစ အေပရယ်လ်လရဲ့ သရုပ်သကန် ရွက်ကြွေတွေက တဖျောဖျော တသောသော။
ဒီလောက် ပူအိုက်နေတာကို သက်သာရအောင် ဘာလုပ်ရပါ့မလဲ လို့ စဉ်းစားနေခိုက်မှာပင်...။
ကျွိခနဲ တံခါးပွင့်သံနှင့်အတူ လော့ခ် မချထားတဲ့ တံခါးကို ပိုင်စိုးပိုင်နင်း တွန်းဖွင့်ပြီး ကော်လာဖိုးတယောက် အိမ်ထဲ ၀င်လာ၏။ လက်ထဲမှာလဲ ငါးမျှားတံနှင့်...။ အမယ်၊ ပလိုင်းသေးသေးလေး တလုံးကိုတောင် လွယ်ထားလိုက်သေးသည်။
`လာ...၊ ကိုတူလင် သွားရအောင်´
`အာ...၊ မလိုက်ပါဘူးဗျာ၊ ပူကပူနဲ့၊ ဒီမှာ အခုလေးတင် အလုပ်ကနေ ပြန်လာတာ´
`လာပါဗျာ၊ ချောင်းဘေးရောက်ရင် အေးသွားမှာပေါ့ဗျ၊ အိမ်ထဲမှာနေရင် ပိုပူနေမှာပေါ့´
အင်း...၊ ဒါတော့လဲ ဟုတ်သား။ `ကဲ...သွားဗျာ´ ဆိုပြီး အလုပ်က ပြန်လာတဲ့ အ၀တ်အစားဖြင့်ပင် ကော်လာဖိုးနောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ခဲ့တော့သည်။
မရောက်တာ ကြာဖြစ်တဲ့ လမ်းကလေးဆီကို ရောက်တော့ စက်ဘီးစီးသူတွေ ဖျောခနဲ ဖျောခနဲ ဖြတ်သွားလိုက်၊ အပြေးလေ့ကျင့်သူတွေက သောခနဲသောခနဲ ရယ်မောကျော်တက်သွားလိုက်နဲ့ သူတို့ကြည့်တော့လဲ ရာသီဥတုကို ပူတယ်လို့တောင် ထင်ပုံမရ...။ အင်းပေါ့လေ၊ သူတို့ကတော့ နေသားကျနေပြီ နေမှာပေါ့။
လမ်းကလေးရဲ့ ဘေးကို အနည်းငယ်မျှ ဖဲ့ဆင်းလျှောက်လိုက်တော့ ချောင်းစပ်ကို ရောက်၏။ ချောင်းစပ်ရောက်မှ ကော်လာဖိုး တယောက် ပါမလာပါလားလို့ သတိထားမိပြီး နောက်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဆရာသမားက လမ်းပုခုံးစပ်မှာ ပေါက်နေတဲ့ မြင်းခွာရွက်တွေကို ကုန်းကုန်း ကုန်းကုန်းနှင့် တဗြုတ်ဗြုတ် ဆွဲနှုတ်နေတာကိုး...။ `ဟေ့၊ လာလေဗျာ၊ အပြန်ကျမှ နှုတ်လဲရသားနဲ့´ လို့ လှမ်းအော်ပြောလိုက်တော့ ကသုတ်ကရက်နှင့် ပြေးဆင်းလာသည်။
ချောင်းစပ်ကိုရောက်တော့ ကြည်လင်နေတဲ့ ချောင်းရေက တဟဲဟဲ စီးဆင်းနေတာ ကူးခတ်ဆော့ကစားချင်စရာ...။ ချောင်းရေကြည်ကြည်နဲ့အတူ တဖြတ်ဖြတ် ကူးလူးနေကြတဲ့ ငါးသလဲထိုး သေးနုပ်နုပ်လေးတွေကို မြင်ရတာ အသဲယားလှသည်။ ယက်သဲ့ဇကာသာ ပါလာလို့ကတော့ ချောင်းထဲဆင်းပြီး လိုက်ထိုးဆယ် ဖမ်းမိမည်ထင်သည်။
`ဟိုးဘက်မှာ ငါးဘတ်သွားမျှားကြမလား၊ အဲဒီဘက်မှာက ကျောက်ဆောင်တွေရှိတော့ အဲဒီကြားထဲ ငါးဘတ်ခိုနိုင်တယ်´
`သွားနှင့်လေ၊ ကျနော် နောက်မှ လိုက်ခဲ့မယ်´
ငါးမျှားတံလေး တယမ်းယမ်းနဲ့ ကော်လာဖိုးတယောက် ချောင်းရိုးကွေ့ ဟိုဘက်ကို ဆက်လျှောက်သွားသည်။ သူကတော့ ငါးမျှားဖို့ထက် ပူအိုက်လွန်းလို့ ချောင်းထဲဆင်းလာတာဆိုတော့ ဟိုဟိုဒီဒီလိုက်ငေးရတာကို ပိုနှစ်သက်နေသည်။ အင်း...၊ ဇရစ်လေး တညွှန့်နှစ်ညွှန့်တော့ လိုက်ခူးမှလို့ တွေးပြီး ချောင်းစပ်မှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ပေါက်နေတဲ့ ဇရစ်ညွှန့်တွေကို ဆတ်ခနဲဆတ်ခနဲ ခပ်သွက်သွက်လေး လိုက်ခူးလိုက်သည်။ ဇရစ်ချိုးရင်းနဲ့တွေ့တဲ့ ဍရင်ကောက် ညွှန့်တွေကိုပါ အလွတ်မပေးစတမ်း နှုတ်လိုက်သေးသည်။ ငါးပိရည်နှင့် တို့စားရမည်။
`ဟာ...၊ ခရုဖင်လိမ်လေးတွေ အများကြီးပါလား´
ဒီခရုလေးတွေက ဖင်တွန့်လိမ်လိမ် ချွန်ချွန်လေးနဲ့ ကြည့်တော့သာ ဘာမှမဟုတ်တယ်။ ဟိုးတနေ့တုန်းက ထိုင်းဈေးဆိုင်ရောက်တော့ တရုတ်ဘက်ကလာတဲ့ ခရုဖင်လိမ် တထုပ်ကို သုံးဒေါ်လာကျော်နဲ့ ရောင်းနေတာ တွေ့ခဲ့ရသေးသည်။ အခုလိုမျိုး ချောင်းထဲက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို စားရမှတော့ အဲဒီဆိုင်ကဟာ ဘယ်ဝယ်လိမ့်မတုန်း။
ကျောက်ကြိုကျောက်ကြား၊ သဲကြိုသဲကြားမှာက ခရုဖင်လိမ်လေးတွေကို တလုံးပြီးတလုံးကောက်လိုက် လက်ထဲမှာ နည်းနည်းများလာရင် ချောင်းဘေးမှာ သွားပုံလိုက်လုပ်နေတုန်း...
"Hey buddy!, what are you doing?"
ချောင်းစပ်တနေရာကနေ စပ်စုဟန် လှမ်းမေးနေတဲ့ အသားနီစပ်စပ်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်...။
"I am picking ခရုဖင်လိမ်စ် up!" လို့ ပြန်အော်ပြောလိုက်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ နားလည်ချင်လည် မလည်ချင်နေ..အေးရော။
ကော်လာဖိုးဆီကိုရောက်တော့ ဆရာသမားက လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ ငါးဘတ်ခပ်ကြီးကြီးတကောင်ကို လှမ်းထောင်ပြပြီး ၀ံ့ကြွားနေသေးသည်။
`ဟာ...၊ တယ်ဟုတ်ပါလား၊ ညနေကျရင် ထမင်းစားလို့တော့ ကောင်းပြီ´
`ဒီမှာလေ၊ ဇရစ်ရယ်၊ ဍရင်ကောက်ညွှန့်ရယ်၊ ခရုဖင်လိမ်တွေရယ်´
ညနေ နေအတော်စောင်းမှပင် နှစ်ယောက်သား ချောင်းထဲမှ ပြန်တက်လာဖြစ်ကြသည်။ လမ်းကလေးပေါ်ကို ရောက်တော့ လူသွားလူလာပင် အတော်အတန် ရှင်းစ ပြုနေလေပြီ။
အိမ်ကိုပြန်ရောက်ရင် ခရုဖင်လိမ်လေးတွေကို တဒုန်းဒုန်းခုတ်ပြီး ဖင်ဖြတ်ပစ်ရမည်။ ဇရစ်ဟင်းချိုထဲမှာ ခရုဖင်လိမ်တွေကို ရောထည့်၊ ငါးဘတ်မွှေဟင်းရယ်၊ ငါးပိရည်နဲ့ ဍရင်ကောက်ညွှန့် တို့စရာရယ်...။ အင်း...၊ ထမင်းစားတော့ မြိန်ဦးမယ်ထင်ပါရဲ့...။
သို့သော်... ... ...။
ဟဲဟဲ...၊ ဖတ်လို့ကောင်းကြလား။ တကယ်က အခုလက်ရှိ ကျနော်နေတဲ့ နေရာမှာ ချမ်းလို့အေးလို့ကောင်းတုန်းဗျ။ ချောင်းထဲဆင်း ငါးဖမ်းဖို့မပြောနဲ့၊ အပြင်မှာ အနွေးထည်မပါဘဲ ကြာကြာနေလို့မရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့်...၊ ဒီနေ့က ကျနော့်ဆီမှာ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့လေ။ အရူးထကြည့်တာပေါ့။ :D တယောက်ထဲ အရူးထရုံနဲ့ အားမရသေးလို့ စာလာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတွေကိုပါ အရူးလုပ်ကြည့်တာပါဗျိုးးးးးးးး။ သဲလွန်စ ပေးချင်လို့...၊ ထိပ်ဆုံးကစာလုံးကို ဖူးး(fool) လို့တောင် ရေးလိုက်သေးတယ်။ :P ယုံတဲ့လူခံ။ အဟီး။
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:01 PM 18 comments